China Electric Lunch Box fekitori uye vagadziri | Meiling
Iyo yemagetsi bhokisi remasikati inogona kushandiswa sebhokisi remasikati, yemagetsi mupunga wekubika, yekutsvaira hovhoni, yekusecha muto muhari, yekukochekera poto, diki rakakura chimiro chemuviri, sekudya kwakanaka muhofisi kana kumba. Yakasarudzika uye yakavandudzwa dhizaini yekudziya inova nechokwadi chekuti chikafu chako chinopiswa zvakaenzana, uye iwe uchiri kugona kunakirwa nezvikafu pane yekutanga yakanaka kuravira. Bhokisi wights 0.84KG uye yakaenzana negirazi regirazi bhokisi. Hapana kunetseka nezvekudonha kana iwe ukaisa muhombodo.
Simba (max) 300W
Divi 220 * 127 * 140mm
Kurongedza divi 755X 575X 300mm (16PCS / katoni)
Net Kurema 840g
Kureba kwetambo yesimba 0.75m
1. Kufanana kwetembiricha, chengeta zvinonaka.
Iyo yakasarudzika uye yakavandudzwa dhizaini yekudziya inova nechokwadi chekuti chikafu chako chinopiswa zvakaenzana, uye iwe uchiri kugona kunakirwa nezvikafu pane yekutanga yakanaka kuravira.
2. Multifunction kushandiswa
Bhokisi remagetsi remagetsi rinogona kupatsanurwa kuita ovhoni yewa microwave, bhokisi remasikati, mupunga wemagetsi mupunga, hovhoni, svutugadzike sopu, poto yekushongedza, chimiro chidiki chemuviri, sekudya kwakanaka muhofisi kana kumba.
3.Tembiricha Unityity Heating
Hazvisanganise nemhute yemvura kuti ipe hwema hunonyadzisa. Iyo tembiricha yunifomu kudziya inotsiva iyo yekukurumidza kupisa kweiyo microwave kuchengetedza chimiro chehutano uye yakanakisa kuravira.
4. Yakakwira-simba aluminium alloy liner uye yakakwana yekupisa mafambiro
5. 800ml chinzvimbo, chiizadze nezvose zvaungade.
Yakasimba simba yemhepo kuomarara, kuvharirwa kwakapetwa kaviri, kukiya nguva dzese dzekubonderana kwechikafu.
6. Iyo yekudziya nzira yakanyarara uye isina kunetseka.
Iyo muvharo chikafu chegiredhi repamusoro tembiricha yekudzivirira PC, liner rakagadzirwa nechikafu giredhi aluminium zvedongo kupfeka. Yakatungamira mwenje chiratidzo, zvirinyore kutarisa mamiriro ekubika chero nguva.
7. Magnetic Interface, pisa kana waipinza mukati.
Hapana chikonzero chekumirira mumutsara wekupisa kwema microwave, unogona kuwana chikafu chinodziya panguva yekushanda maawa.
8. Zviri nyore chaizvo uye zvinotakurika kutora chikafu chako uende nacho
Iri bhokisi rinorwa 0.84KG uye rakaenzana negirazi regirazi bhokisi. Hapana kunetseka nezvekudonha kana iwe ukaisa muhombodo.
9. Yese yakashambidzika yekuchenesa nyore
Chikafu giredhi remukati zvedongo bhokisi riri nyore kuchenesa uye kusiri-kunamira. Zvinongotora 3mins kugeza.
Pashure: Magetsi Steam Lunch Bhokisi
Zvadaro: Yakawanda-inoshanda yekubika hari
Magetsi Inodziya Lunch Bhokisi
Magetsi Kuchenesa Lunch Bhokisi
Inotakurika Magetsi Kuchenesa Lunch Bhokisi